စပွန်ဆာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » စပွန်ဆာ	19
- A mar nyo
Posted by A mar nyo on May 28, 2015 in Creative Writing, Short Story | 19 comments
ရုတ်တရက်ဖုန်းထမည်လိုက်သောကြောင့်လန့်နိုးကာဒေါသကြီးစွာဖြင့်ဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်သည်။ဖုန်းတွင်ပေါ်နေသောအမည်က Mr.Park ဟင်ဒီအချိန်ကြီးသူကဘာဖြစ်လို့ဖုန်းဆက်ပါလိမ့်နာရီ
သည်။ အရင်ကတော့မုဒိတာအိမ်ရာမှာနေပေမဲ့ နယ်မှလာသောအလုပ်သမလေးများကို အဆောင်အနေဖြင့် တိုက်ခန်းကိုပေးလိုက်သောကြောင့် ဆိုင်အပေါ်ထပ်က
အခန်းသုံးခန်းမှာညဘက်အိပ်ကြလေသည်။ တနေကုန်ဆိုင်မှာနေသောကြောင့်တခြားတိုက်ခန်းရှာလည်းအပိုငွေထွက်သွားမည်စိုးသောကြောင့်ဆိုင်မှာနေကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ ယနေ့လည်းညဘက်ပင်ပန်းသည်ဆိုကာတနေကုန်မထ၍ ပြန်ကာနီးမှနိုးခဲ့သည်ကိုဖုန်းပျောက်သည်ဆိုတော့စဉ်းစားစရာ
ဆိုင်မှာရှိတာကနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်း။ အလုပ်သမလေးများကဖြစ်တဲ့မနီ၊ဇင်ဇင်၊သီရိအပြင်မရှိ။ကိုကျော်တော့ရှိသည် ဒါပေမဲ့သူကလည်းအေးအေးဆေးဆေးသမား။ သူဌေးတို့နဲ့အတူတူနေကာစိတ်ချရသူ၊ ပိုက်ဆံလိုလည်းကြိုထုတ်နေသူဖြစ်သောကြောင့်မဖြစ်နိုင်။ အပေါ်မှာအိပ်နေလျင်မတက်ရန်မှာထားသောကြောင့်
ဧည်သည်ပါး၍သူတက်အိပ်နေတာသာကြည့်တော့။ ငါပြန်လာပြီးမှများဧည်သည်များလာသေးလားစဉ်းစားမိသည်။ပျောက်သည်ဆိုတော့မတတ်​နိုင် ကောင်မလေးတွေဖုန်းဆက်ပေးပါလို့ဆို၍ ဆက်ပေးလိုက်သည်။ ဖုန်းမကိုင်။ အေးလေ ညဥ့်နက်နေပြီအိပ်ပျော်နေမှာပေါ့ဟု
တွေးကာ Mr.Parkဆီဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်ပြီး ဖုန်းမကိုင်ကြောင်းပြောလိုက်သည်။ ပြီးနောက်ဖုန်းကိုအသံပိတ်ကာ
မထင်မှတ်သောအဖြေကြောင့်မှင်တတ်သွားသည်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့လည်းတွေးရင်းတစ်ဆက်တည်း အော်သူ့မှာဖုန်းမှမရှိပဲလို့တွေးမိသည်။
တာ သူဌေးနဲ့စားဖိုမှူးလိုက်သွားတယ်လေ အဆောင်ကို’
စကားပြောနေရင်းတံခါးဖွင့်သံကြား၍လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မနီနဲ့ဇင်ဇင်ဝင်လာသည်။ ညကမအိပ်ရလို့ထင်ပါ့
ဟန်နီတို့ဆိုသည်မှာသူဌေးအသိကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဆောင်မနေချင်၍ သူဌေးထံခွင့်တောင်းကာနေသောသူများဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားစကားမတတ်သော်
လည်းနီးစပ်စွာအလုပ်လုပ်နေသူများဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်းနားလည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်တော်သေးသည်
ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်သည်။ မနီသည်စားပွဲများသုတ်နေရင်း ညကအကြောင်းများကိုဆက်ပြောနေသည်။
‘ပြန်ရလို့တော်သေးတာပေါ့ဆုရယ်ညကသူဌေးဆိုအခန်းကိုရောက်လာတာချွေးတွေလည်းပြန်လို့သနားပါတယ် သီရိကဖုန်းကိုယူလာပြီးသူ့အဖွားအိမ်ထားတာတဲ့လေ အစ်မတို့ကိုမပြောဘူး ဟန်နီကိုခေါ်သွားတာသီရိက အဲ့ဒါဟန်နီတို့ကပြန်ပြောပြတာ မနက်ကလည်းအစောကြီးထသွားတယ် အစ်မတို့မနိုးခင်ရှက်လို့နဲ့တူပါတယ်’
‘ခိုးတုန်းကခိုးပြီးတော့သူကရှက်နေတာလားအစ်မရယ်သူဌေးတို့ကတော့ညီမတို့လူမျိုးကိုအထင်သေးတော့မှာပဲ ညီမကအဲ့ဒါကိုပိုရှက်တယ်’
‘ဆုရယ်သူကဟန်နီတို့ကိုအားကျနေတာလေ ဟိုဟာတွေကသုံးတယ်လေ အဝတ်အစားဆိုလည်းဝယ်နိုင်တာကိုး တစ်ခါတစ်လေစပွန်ဆာရလာတယ်ရလာတယ်နဲ့လေ တစ်ခါရရင်ဒေါ်လာတွေကိုသူကလည်းအဲ့လိုစပွန်ဆာလိုချင်သုံးချင်တာလေ ပြီးတော့သူဌေးကလည်းဖုန်းကိုအလွယ်ထားတော့သူလိုချင်မှာပေါ့’
မနီပြောသောစကားများကိုနားထောင်ရင်း မွန်းကြပ်လာသည်။ စပွန်ဆာလိုချင်သည်တဲ့လား သည်စပွန်ဆာရတာ
ကောင်းသောရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခန္တာကိုယ်နှင့်ရင်း၍ရသောစပွန်ဆာ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထင်အမြင်သေးခံရပြီး ခေါင်းမဖော်နိုင်ပဲရသောစပွန်ဆာဆိုတာ သူနားမလည်လိုက်လေခြင်း။ မိဘများမှာဘယ်လောက်တောင်ရင်
ထုမနာဖြစ်နေခြင်းဆိုတာသူမသိလေလား။ စဉ်းစားရင်း ဆရာချစ်ဦးညိုစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောခဲ့သောစကားကိုသတိရမိသည်။
‘လူငယ်တွေဟာမနက်ပြတင်းတံခါးဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်း အသစ်သစ်တွေဝင်လာတယ် အဲ့ဒီအသစ်တွေနောက်ပြေးလိုက်ရင်းပြေးလိုက်ရင်း ချော်လဲတဲ့အခါ အိတ်ကပ်ထဲက စာရိတ္တဆိုတာက ထွက်ကြသွားတတ်တယ်’
အင်း ဆရာပြောတာမှန်လိုက်တာဟုစဉ်းစားရင်း သီရိတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောပြမှဒီလိုအတွေးမှားကြီးကနေရုန်းထွက်နိုင်မှာပါလိမ့်။
About A mar nyo
A mar nyo has written6post in this Website..
View all posts by A mar nyo →	Blog
Alinsett @ Maung Thura says: ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ဖွေးဖွေးလေးနဲ့ စပွန်ဆာပေးချင်လိုက်တာဂျာာာာာ
ဒီညီမတော် အမာညိုလေးကိုတောင် မတွေ့တာ ကြာပေါ့
ကျုပ်ကို သတိမရဘူးလား ညီမတော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: တချိန် က အမှားးလို့ ထင်ခဲ့တာတွေ ကို
မရှက်တတ်ကြတော့တဲ့ ခေတ် ရောက်လာပြီ..
kai says: Sugar Daddy ကယူအက်စ်မှာလည်း.. တရားဝင်လိုဖြစ်လို့လာပြီလေ…။
ကောလိပ်/တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့.. ချေးငွေကလည်း.. ဒေါ်လာသန်းသောင်းချီကုန်ပြီ..။
တော်ယုံ မိန်းကလေး/ကျောင်းသူတယောက်ဘယ်လိုမှ ပြန်မဆပ်နိုင်…။
ဒီလိုအချိန်မှာ.. “ချိုချိုဖေ”တွေက..”ပျိုပျိုမေ”တွေကို.. စပွန်ဆာပေး… ငွေပေးတာမျိုး.. ကောင်းတယ်ဆိုရမှာပါပဲ..။
ဖြစ်သင့်..ဖြစ်ရမှာပေါ့… စနစ်တကျဖြစ်ဖို့.. ဥပဒေနှပ်ကြောင်းပေးလိုက်ဖို့ပဲ.. လိုပါတယ်..။
Two New Threats To Financial Stability In FSOC Report
ValueWalk-May 26, 2015
Student loan delinquency rates hit 12% last year, twice the 2003 rate, … of the outstanding $1.2 trillion in student loans is going to be paid back.
Foreign Resident says: အဟိ ၊ အဟိ ။ ဗဟုသုတ ပြောပြရဦးမယ် ။
စပွန်စာပေးတဲ့ အန်ကယ်ကြီးတွေကို ဒီဖက်နိုင်ငံမှာ Sugar Daddy ခေါ်သလို ၊
စပွန်စာ အပေးခံရတဲ့ ကောင်လေးတွေကို Toy Boy လို့ ခေါ်တယ် ။
kai says: စပွန်ဆာ ဆိုတာ ဘယ်သူထွင်ရေးခဲ့မှန်းမသိပေမယ့်… Sugar Daddy ကသာ ကမ္ဘာသုံးအမှန်လို့ပြောချင်မိတာ..
မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့.. ချိုချိုစို့ချင်သော.. အဲ..အဲ… အချိုကြိုက်သောဒက်ဒီ… ချိုချိုဖေ…လို့…။ အဲဒီ ချိုချိုပေးတဲ့.. ပျိုပျိုမေတွေကိုတော့.. Sugar Baby တဲ့..
Toy Boy တွေရဲ့.. ချိုချိုတီကိုတော့.. Sugar Momma, Sugar Mama ဆိုပါတယ်..။
A mar nyo says: ဟုတ်တယ်အစ်မခင်ဇော်ရေ မရှက်တတ်ကြတော့ဘူး သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး
A mar nyo says: ကိုအလက်ဆင်းရေ မတွေတာက စာရေးတာမှာ မမကြီး(မမှီ)ကို မမီမှာ စိုးလို့ပါ
အောင် မိုးသူ says: စပွန်ဆာလေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မြန်မာပြည်မှာတော့ စပွန်ဆာ ရှာတာ မိန်းကလေးတွေတင် မဟုတ်တော့ဘူး
ယောက်ျား လေးတွေ လဲ စပွန်ဆာ ဒေါ်ဒေါ် တီတီ မမ တွေ ကို ရှာနေကြပြီ
hmee says: တ​ယောက်​​တော့ ရွာထဲ ​ရောက်​လာပြီ။ အခု​လော​လောဆယ်​ စာဖတ်​အားအ​ကောင်းဆုံး စာအုပ်​အဝယ်​ဆုံးက ညီမ​တော်​ပါ။ ကိုယ်​​တောင်​ စာအုပ်​​တွေ ဝယ်​မဖတ်​​တော့ပဲ အိမ်​မှာ သွားသွားသယ်​ပြီး ဖတ်​​နေရတာ။
သူဂျီ​ရေ ​မောင်​နှမ ၈​ယောက်​ထဲမှာ စာဖတ်​အနာဆုံး အစ်​ကိုကြီးကို ရွာထဲ ​ကို ​ရောက်​လာ​အောင်​​ခေါ်​နေတယ်​။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: အယ်လ်အေရောက်.. မမှီမိတ်ဆွေတွေတောင်… မေးနေသေး..။
ကျေးကျေးပါဗျာ..။ စာဖတ်နာသူများနဲ့ဆွေးနွေးရ..ငြင်းခုန်ရ.. ပိုကောင်းသပေါ့..
အနုပညာလို့ပြောပြပါနော.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: LA ရုံးမှာ ​ရောက်​​နေသူ တ​ယောက်​က ကျွန်​မရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်​ချင်းပါ သူဂျီး​ရေ။ ​ပြောမနာ ဆိုမနာ ​ကျောင်း​နေဘက်​ သူငယ်​ချင်းပါ။ ကျွန်​မလည်း သဂျီးတို့ ဆီ လာချင်​သား ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စာအဖတ် အနာဆုံး ဆိုတဲ့ အကိုကြီးကို
စာတွေပါရေးအောင်တိုက်တွန်း ပါ မမှီရေ
hmee says: ဟုတ်​ကဲ့ပါ ​လေး​ပေါက်​။ ကိုကြီးက ကဗျာစပ်​တာလည်း ​ကောင်းတယ်​ဗျာ။
Mike says: .အတွေ့အကြုံ လေးကိုအခြေခံပြီးရေးထားတာကောင်းပါတယ်…အားပေးနေပါတယ်
လုံမလေးမွန်မွန် says: မတွေ့တာတောင် ကြာပေါ့… မတွေ့ဆို.. ကိုယ်လည်း ရွာထဲသိပ်မဝင်ဖြစ်…
ခေတ်ကပြောင်းနေပြီ.. စပွန်ဆာမရှာရင်တောင် ခေတ်မမီဘူး ထင်နေကြတာ..ကိုယ်တွေကတော့ ခပ်တုံးတုံးနေနေရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 42
A mar nyo says: ဟုတ်တယ်မမမွန်ရေခပ်တုံးတုံးနေလို့ ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး။ ကကြီးသားအများစုက သူတို့နိူင်ငံမှာအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှူလွမ်းသွာပြီဆိုတော့နားမလည်ကြဘူး
Ma Ma says: စပွန်ဆာ ဆိုတာကြီး နားထောင်ရဆိုးတာ ပညတ်မှာ မှတ်ထားမိသွားတယ်ထင်တယ်….
တချို့အစီအစဉ်တွေမှာ Sponsor by …. ဆိုတာ ပါလာရင်တောင် အတွေးက အဆိုးဘက်ရောက်ချင်ချင်:a:
lu lu says: လူငယ်တွေဟာမနက်ပြတင်းတံခါးဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်း အသစ်သစ်တွေဝင်လာတယ် အဲ့ဒီအသစ်တွေနောက်ပြေးလိုက်ရင်းပြေးလိုက်ရင်း ချော်လဲတဲ့အခါ အိတ်ကပ်ထဲက စာရိတ္တဆိုတာက ထွက်ကြသွားတတ်တယ်’